Bilaogy Recommended - The Reward Reward
Home Resources Books Recommended
Manoro foana ny bokin'i Gary Wilson "Ny atidohanao amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ary ny Science of Addiction"Satria mametraka ny siansa manan-danja ao amin'io faritra io. Tsara indrindra amin'ny fanazavana Ny fivelaran'ny atidoha ao amin'ny atidoha amin'ny fomba iray azo tsidihina ary feno tantara mahafinaritra ataon'ny vahoaka izay miasa amin'ny fanarenana. Miorina eo amin'ny lahateniny TEDx mahomby The Great Porn Experiment izay nahitana sarimihetsika 9 tapitrisa tamin'ny YouTube ary nadika tamin'ny fiteny 18.
Profesora Stanford nisintaka momba ny psikolojia sosialy, niasa niaraka tamin'i Nikita Coulombe mba haka boky tsara antsoina hoe Philip Zimbardo (Stanford Prison Experiment) Tapaka ny lehilahy - Maninona ny zatovo no mitolona ary inona no azontsika atao amin'izany. Miorina amin'ny lahateny fohy TED ho avy, saingy mendri-piderana, Ny famoizana ny lehilahy, Navoakan'i Zimbardo sy Coulombe ny sosialy, toekarena ary tontolo iainana izay mamolavola zatovolahy anio ary mitondra azy ireo amin'ny valisoa mora hita ao amin'ny aterineto.
Raha tia ilay sarimihetsika Inside Out ianao, dia ho tianao kokoa izany, saingy mbola lavitra tsotra tsotra to key neurochemicals izay mitaona ny fitondran-tenantsika sy ny fahazarantsika. Izany dia Fahazotoan'ny atidoha mahasambatra, atsangano ny atidohanao hanatsara ny serotoninina, dopamine, oxytocine ary endorphine nataon'i Loretta Graziano Breuning. Neken'i Loretta tamim-panetren-tena ny fanasana nataon'ny TRF hiteny ao amin'ny The Melting Pot, Edinburgh tamin'ny volana Jona. Voarara ilay efitrano ary tena noraisina tsara ilay lahateny.
Avereno atao ny ati-dohan'ny zanakao - Drafitra 4 herinandro hampitsaharana ny fifangaroana, hampiakarana naoty ary hampitomboana ny fahaiza-manao ara-tsosialy avy amin'i Dr. Victoria Dunckley, ankizy mpitsabo aretin-tsaina. Heveriny fa ny 80% amin'ireo ankizy hitany dia tsy manana olana ara-pahasalamana ara-tsaina (toy ny ADHD, ny fahaketrahana, ny tebiteby, sns.) Izy ireo no voan'ny aretina. Dr Dunckley dia nahita fa aorian'ny fampisehoana 3 mankany amin'ny efijery 4-herinandro dia mihena na mihitsoka ny soritr'aretin'ny sendikan'ny maso elektronika amin'ny ankabeazany. Manasongadina ny siansa sy ny tranga mahavariana ho an'ny detox digitale.
Ity dia boky iray an'ny mpitsabo amerikana za-draharaha iray hafa, Rob Weiss, LCSW, CSAT-S. Betsaka ny zavatra nianarantsika avy Fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo 101 - torolàlana ho an'ny fanasitranana amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia, sary vetaveta ary fitiavana. Manana namana izy io Torohevitra momba ny Workshop 24 Fampisehoana azo ampiharina mba hitarihana ny fialana amin'ny fahantrana an-tsokosoko. Nanao asa lehibe niaraka tamin'ny LGBT + fiaraha-monina.
Raha mpitsabo aretin-tsaina na mpanolotsaina miasa amin'ny Internet momba ny pôrnôgrafia ianao indrindra amin'ny tanora Mety ho liana amin'ny boky antsoina hoe "Ahoana ny fialana amin'ny Internet Porn Cyberography?"Nataon'i Christopher Mulligan LCSW. Mulligan dia teratany Amerikana za-draharaha izay nametraka programa fanarenana 16 herinandro. Izy io dia boky navoaka ho an'ny tenany ary manana fepetra vitsivitsy fa hafa kosa ny loharano lehibe. Izy io dia misarika ny fampianaran'ny manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra toy ny dokotera Dr Patrick Carnes sy ny academica Dr David Delmonico sy Dr. Elizabeth Griffin.
Firaisana ara-nofo, tiana ary haino aman-jery sosialy - miresaka amin'ireo zatovontsika amin'ny vanim-potoana niomerika avy amin'i Allison Havey sy Deana Puccio, (Amerikana fa monina any Londra), mpanorina ny The RAP Project. Ity dia boky tena mora azo Reny roa ny tanora 5 miaraka amin'ny torohevitra mahasoa ho an'ny ray aman-dreny miaina ny tena zava-misy iainan'ny zatovo ankehitriny. Manao lahateny any an-tsekoly ihany koa izy ireo mikasika ny fiantraikan'ny aterineto amin'ny fitondran-tena sy ny fahatsaram-panahy.